Steel mpempe akwụkwọ
Ngwurugwu na-enweghị atụ
Shandong Kunda Steel Co., Ltd. nwere nnukwu ngwongwo nke efere ígwè, nke nwere ike ịhazi, belata, ma tinye ya maka mbupụ ya site n'oké osimiri. Anyị nwere ọtụtụ igwe ịcha, igwe mbadamba, na igwe na-ekpo ọkụ iji gboo mkpa gị dị iche iche. Anyị nwere ike ime nchara iwepụ ...
site ha na 21-06-16
Shandong Kunda Steel Co., Ltd. Emi odude ke Liaocheng obodo, Shandong n'ógbè, nke bụ a ọmarịcha obodo okpueze dị ka ＂Oriental Venice＂. Liaocheng na ọdịda anyanwụ nke mpaghara Shandong, 200Km South site na Beijing City, 100Km ọdịda anyanwụ site na Jinan City.Jiqing Expressway gafere obodo ahụ site na East ruo West; Beijin ...
Nyocha nke ọnọdụ ọnụahịa nchara
N'okpuru mmetụta nke ihe dịka mmụba nke akụ na ụba ụlọ na atụmanya nchekwube nke ịrị elu ịrị elu, ọnụ ahịa nchara anụ ụlọ ebutela ịrị elu n'ozuzu na nso nso a. Na agbanyeghị ma ọ bụ rebar eji rụọ ụlọ, ma ọ bụ mpempe akwụkwọ eji eji ụgbọala na ụlọ a ...
Ngwongwo China na-ebupụ mgbanwe ọhụrụ
Mịnịstrị na-ahụ maka ego na gọọmentị na-ahụ maka ụtụ isi jikọtara ọkwa: Nkagbu nke mbugharị ụtụ isi mbupụ maka ụfọdụ ngwaahịa nchara bido na May 1, 2021 China Broadcasting Network, Beijing, Eprel 29 (Reporter Zhang Shengqi) Dabere na weebụsaịtị nke Ministry of Finance na ...
Ọnụahịa mbuba na-ebili, ọnụahịa nchara na-ada ada
A na - akọ na n'ihi mmetụta nke izu Suez Canal mgbochi, amachibidoro ikike nke ụgbọ mmiri na akụrụngwa na Asia. N'izu a, ọnụego otu ngwongwo e ji ebu ngwongwo n'Eshia na Yurop 'amụbaala nke ukwuu. Na Eprel 9th, Ningbo Container Freight Index (...
Ọnụahịa nchara gbanwere
ince March, anụ ụlọ nchara ahịa ahọrọla ịgbasa elu ọzọ na mbubreyo March mgbe enwe elu-larịị ujo mgbanwe. Kpọsị, dịka nke Machị 26, gịnị bụ mgbagha n'azụ ịhọrọ ihe ịga nke ọma mgbe mgbanwe ngwa ngwa na ọnụ ahịa igwe dị? Na ihe ga - eme ọzọ mgbe ...
2020, ọnụahịa ahịa nchara nke China ga-ebu ụzọ daa wee bilie, na-enwe mgbanwe dị ukwuu ma na-ebili
Ka ọ na-erule afọ 2020, ọnụ ahịa ahịa nchara nke China ga-ebu ụzọ daa wee bilie, na-enwe nnukwu mgbanwe na ịrị elu. Site na November 10, 2020, mba ígwè price mejupụtara index ga-155.5 isi, na-abawanye nke 7.08% karịrị otu oge n'afọ gara aga. Ebe etiti ike ndọda ebilila. Ndị ahịa chọrọ ...
Mpaghara Mmekọrịta Akụ na ụba (RCEP)
Nke a bụ mmeri maka ọtụtụ azụmaahịa na azụmaahịa efu. Ọrịa ahụ agbasazuola ụwa niile, azụmaahịa mba na itinye ego na mba ụwa agbadatala nke ukwuu, akụnụba nke usoro ọrụ mmepụta ihe egbochiri, na ijikọ ụwa ọnụ nke akụ na ụba ezutewo nsogbu ugbu a, na unilateralism an ...
Ndị na-ere ahịa nchara na ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-ebu amụma na ahịa nchara ga-ebili n'ọdịnihu dị nso
site ha na 20-11-09
Nationalbọchị Mba mgbe nchara ígwè siri ike, a na-atụ anya ka ahịa nchara na-ebili n'ọdịnihu dị nso. Dị ka ndị na-ere nchara na ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ si kwuo. Ogwe dị ugbu a, eriri igwe na-ekpo ọkụ ọkụ. Oyi na-acha uhie uhie na ọkara - nnukwu efere na ụdị ndị ọzọ akọwapụtara iche. Na usoro nke mmanya ute ...
Ọnụ ahịa mbupu na-ebili, ọnụahịa nchara ...
Adreesị: 2F, Contemporary International Building, Dongchangfu District, Liaocheng, Shandong, China